हिमाली भेगमा व्यापक हिमपात » खबरहरुको एउटै केन्द्र
हिमाली भेगमा व्यापक हिमपात
शनिबार, फाल्गुन २८, २०७३ ०६:५५ मा प्रकाशित !
२८ फागुन, जुम्ला । उच्च हिमाली भेगमा शुक्रबार दिनभर भारी मात्रामा हिमपात भएको छ । बिहीबार बिहानैदेखि जुम्लामा परेको पानीले डाँडाकाँडामा हिमपात भए पनि शुक्रबार भने  जुम्ला उपत्यकासहित सबैजसो स्थानमा बिहानैदेखि लगातारको हिमपात भएको छ ।
लगातारको हिमपातले जिल्लाको जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ । हिउँ परेपछि सरकारी कार्यालयहरू प्रभावित भएका छन । यसैगरी विद्यालयहरूमा बालबालिका आउन नसकेपछि पठनपाठन प्रभावित बन्न पुज्ञ्ो । हिमपातले कर्णाली राजमार्गमा चल्ने छोटो तथा लामो दूरीका गाडीहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन । हिउँ परिरहेकै कारण बिहीबारदेखि नेपालगन्ज तथा सुर्खेतबाट हुने उडान सेवा सबै रद्द भएका छन ।   यसैगरी हिउँ परेका कारण मरेका मानिसहरूको मलामी जान तथा दाहसंस्कार गर्नसमेत हम्मेहम्मे भएको थियो ।
लामो समयसम्म खडेरी भएको जुम्लामा पानी परेपछि किसानहरू खुसीसमेत भएका छन । यो हिउँले कृषि बालीलाई राम्रो गर्ने भन्दै दङ्ग परेका छन । जुम्लामा शुक्रबार न्यूनतम तापक्रम ०।४ डिग्री सेल्सियस र वर्षा ५।८ मिलिमिटर रहेको हावापानी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख एपी चौरसियाले बताउनुभयो ।
यसैगरी मुगु समाचारदाताका अनुसार हिउँ पर्ने महिना सकिएर चैत महिना लाग्नै लाग्दा पनि हिउँ नपरेपछि चिन्तित बनेका यहाँका कृषकहरू खुसी भएका छन । पुसबाट प्रायः तीन पटकसम्म हिउँ पर्नेजस्तो मौसम भए पनि आवश्यक मात्रामा पानी र हिउँ नपर्दा कृषकहरू खेत गरामा लगाएका हिउँदेबाली उत्पादन नहुने भयो र सुक्खा मौसमले रुघा, खोकी तथा मौसमजन्य रोगबाट पीडित हुने भन्दै चिन्तित भएका थिए । तर, तीन दिन यताबाट मौसममा परिवर्तन आई हिमाली क्षेत्रहरूमा हिउँ र बेसीतिर लगातार पानी पर्न थालेपछि भने कृषकहरू खुसी भएका हुन ।
मौसम बिग्रिएकाले मुगु जिल्लास्थित रारा विमानस्थलमा उडान हुन सकेको छैन । मुगु आउने र जिल्लाबाट बाहिरिने यात्रुहरू विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन । मुगु जिल्लामा सरुवा भएर आउन लागेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल तीन दिन यताबाट हवाई उडान नहुँदा बाँकेस्थित राँझा विमानस्थलमै आकाश खुल्ने प्रतीक्षामा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन केसीले बताए। हिम्पात्
घुच्ची लेकमा हिउँ परेकाले र लगातारको पानीले नाग्म–गमगढी कच्ची सडकखण्ड हिलाम्य भएकाले मुगु आउने मालवाहक गाडी र यात्रुवाहक बस पनि बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन ।
डोल्पामा शुक्रबार बिहानैदेखि हिमपात सुरु भएको छ । गत बुधबारदेखिको लगातार वर्षापछि जिल्लाभर हिमपात सुरु भएको हो । वर्षासँगैको भारी हिमपातले बढेको अत्यधिक चिसोका कारण डोल्पालीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । डोल्पामा हिमपात अहिले पनि जारी छ । झन्डै तीन महिनाको चरम खडेरीपछि परेको वर्षासँगैको भारी हिमपातले कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुने आशामा डोल्पाली कृषकमा उत्साह छाएको छ ।
“खाद्यवस्तु उत्पादन घट्ने भन्दै किसान चिन्तित भएका थिए तर ढिलै भए पनि वर्षा भएको छ, यसबाट गरिखाने कृषकलाई केही भए पनि राहत भयो”, उनले भने ।
PREVIOUS POST Previous post: मोर्चाका सांसदबाट रोष्टम घेराउ
NEXT POST Next post: जोखिम बस्ती छाडे जग्गा किन्न दुई लाख
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, फाल्गुन २८, २०७३ ०६:५५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, फाल्गुन २८, २०७३ ०६:५५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, फाल्गुन २८, २०७३ ०६:५५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, फाल्गुन २८, २०७३ ०६:५५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, फाल्गुन २८, २०७३ ०६:५५